Dumarka quruxda haweenka iyo sida loola macaamilo
Naag walbaba waxay doonaysaa inay qurux badan tahay. Beauty waxay leedahay cadowgeeda iyo asxaabteeda. Dumarka quruxda badanaa waxay ku dhuuntaan si aan la ogaan, oo waxay yareeyaan dadaalada aan jirin. Waxaan u baahannahay inaan wax ka qabano cadawga quruxda haweenka waxayna bilaabaan inay la dagaalamaan.
Dumarka quruxda dumarka
1 cadowga quruxda dumarka - ecology, cimilada
Dhaqan xumida arimahan oo ku saabsan muuqaalka haweenka ayaa sheegay in badan, iyo dumar badan oo aan isku dayin inay isku diidaan. Hase yeeshe, saameyntaas waxaa suurtagal ah in lagu guuleysto guusha, adiga oo naftaada kaaga abuuraya dabiici ah "gaashaan" dabiici ah oo leh caawimo jirdhis jidheed, dabiiciga dabiiciga ah, yoga.
2 cadowga quruxda dumarka - difaaca oo yaraaday
Cudurada joogtada ah (gynecological, urological, gastroenterological and cardiovascular), waxaas oo dhan waxay isla markiiba saameynayaan socodka, durbaanka, cirridka, ilkaha, ciddiyaha, timaha iyo maqaarka. Haddii aad si joogto ah u xoojisid difaac, waxaad ku caawin kartaa jirka, sababtoo ah nidaamka difaaca jirka oo wanaagsan ayaa jidhka ka qabsan doona cuduro badan. Xeerarka difaaca caafimaadku waxay akhriyaan - nidaamka maalinta, tababarka baabuurta ee antistress, tababarka maalin kasta iyo adkeynta.
3 Dumarka quruxda dumarka - nafaqo daro
La qabsashada cadowgani way ka sahlantahay labadii hore. Dareem la'aanta cuntooyinka, la'aanta macdanta iyo fiitamiinada, la'aanta fiber, iyo sidoo kale tiro badan oo cusbada leh, sigaar cabbin, dufan, duban, cunto dhadhan leh, cunto fudud, cunto aan joogto ahayn, waxaas oo dhan waxay ku dhufanayaan dharka quruxda iyo caafimaadka. Nafaqo aan habooneyn ayaa keenta xiidmaha dysbiosis, caloosha oo joogto ah iyo dheefshiidka liidata, tani waxay sidoo kale keeni kartaa miisaan culus iyo xaalada maqaarka oo liita.
Ma aha arrin adag in la sameeyo nidaam cabitaan iyo cunto. Dooro cuntooyinka aad jeceshahay iyo cuntooyinka aad ka heshay cuntooyinka aad ugu jeceshahay. Roodhku wuxuu u fiican yahay inuu ku badalo hadhuudh, cun cunno khudaar badan oo la kariyey. Cun 3dii saacadoodba hal mar qaybo yar. Maalin, cab cabir 2 litir oo biyo ah, cabitaan aan ku filleyn oo dareere ah ayaa saameyn kara maqaarka. Ha u diyaarsan cunto nafaqo leh oo adag iyo cunto aan la cunin, tani waxay sababtaa cunto badan. Cuntada waxaa ku jira daaweyn wax ku ool ah - nuts, miraha la qalajiyey, shukulaatada madow, ha ilaawin miro cusub.
4 cadowga quruxda dumarka - hurdada la'aan, culeyska xad-dhaafka ah, habka khaldan ee maalinta
Waa wax la aqbali karo in lagu shaqeeyo 16 saacadood oo keliya si fudud. Laguma talin karo in aad maalin kasta isku dhisto habeenkii, laakiin haddii hawshu ay isbeddeleyso, markaa waxaad u baahan tahay inaad nasato inta lagu jiro maalinta.
5 cadowga quruxda dumarka - qaab nololeed dabacsan
Jidhku waxa loogu talagalay waxqabad jireed oo weyn. Si aad naftaada u quudiso, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u guurto - si aad u qaadato miisaanka, si aad u daryeesho oo aad u leexiso, inaad raacdo, inaad orodo, socoto. Si loo ilaaliyo quruxda iyo caafimaadka, jidhku wuxuu u baahan yahay inuu ilaaliyo nidaamka mootada. Haddii aad shaqeyneyso kuma xirna dadaal jireed, waxaad u baahan tahay inaad ka qeyb qaadato waxbarashada jimicsiga si aad u bixiso jimicsi jireed jirka.
6 cadowga quruxda haweenka - walaaca, walbahaarka dareenka ee joogtada ah
Heroes in filimka ka dib walaaca si weyn u koraan jir iyo koraan cawl. Nolosha waxay u dhacdaa si isku mid ah, kaliya tartiib tartiib ah. Ka dib shoog daran, xitaa haween caafimaad leh oo qurux badan ayaa eegi doona da 'wayn. Khabiirada cilminafsiyeedka waxay kugula taliyaan in ay beddelaan dabeecadahooda, haddii aysan suurtagal ahayn in la badalo duruufahan Dumarka waxaa lagu beddelaa dhoola cad oo muuqaal ah. Eeg si aad u dhow oo waxaad arki doontaa in daruur duufaan madow ay tahay daruur daruuri ah.
7 Dumarka quruxda haweenka - caadooyinka xun ee khamriga iyo sigaarka
Laga soo bilaabo khamriga, isku dhafka ayaa sii xumaanaya, waxay kor u qaadeysaa dhamaystirka. Marka ay adag tahay in la siiyo khamriga, waa inaad iska ilaalisaa cabitaan xoog leh. Xaddidaadda waxyeellada badnayd waxay noqon doontaa miro qallalan oo tayo fiican leh oo tiro yar. Sigaarku waxay ku sumoobaan dhammaan nidaamyada iyo xubnaha, taas oo keentay xaalad sii xumaato iyo xaalad ilkeed. Way fiican tahay inaanan bilaabin sigaar-cabista. Sigaarka iyo aalkoladu waxay bixiyaan khiyaamo ku-meel-gaadh ah, qofku wuu ka mashquuliyaa dhibaatooyinka, laakiin waxay qaataan wax ka badan inta ay soo celinayaan.
8 cadowga quruxda dumarka - daryeel aan haboonayn ee muuqaalkiisa
Badanaa haweenka, gaar ahaan dumarka dhalinyarada ah, kama fikiraan cawaaqibka ciddiyaha, timaha, maqaarka, iyo tijaabin muuqaalkooda. Kuwa walxaha gardarrada ah ee ku jira maaddooyinka kookoroolka, maadooyinka curling, timaha timaha, waxay si xun u saameeyaan muuqaalka. Xusuusnow, quruxda ugu fiican waa dabiiciga.
9 cadowga quruxda dumarka - kabo iyo dhar aan fiicnayn
Waxay u muuqataa in haweeney ay kabo caga sare leh iyo dhar dhagan oo ka dhigaysa mid xariif ah. Sababtoo ah dharka adkeynaya ama dhaqdhaqaaqa culus ayaa si xun u saameynaya xaaladda xaglaha. Cadaadiska loogu talagalay dharka uu caloosha furan yahay wuxuu dhalin karaa horumarinta cudurrada nidaamka jimicsiga. Miyuu u qalmaa inuu u tago dhibbanayaasha sababtoo ah farxad la isweydiiyo, si uu u noqdo shayga ra'yiga raga, marmarka qaarkoodna kama fogaanayo.
10 cadowga quruxda dumarka - dhaqdhaqaaqa galmada oo yaraaday
Guud ahaan, haweeney waxaa loo abuuray jacayl iyo nadaafad, haddii aysan dareemeynin sida haweeney, ka dibna jacaylka iyo dheddigga ee muuqaalkiisa ayaa si tartiib ah u baxaya. Badanaa, haweenka guurka ah ee aan haysan wax dhibaato ah noloshooda khatarta, dhaqdhaqaaqa galmada oo yareeya. Dhibaatadaasi waa in la xalliyo lammaane, mararka qaarkoodna cilmi-nafsi ayaa u baahan caawimaad.
Waxaad si ula kac ah ula dagaalami kartaa cadowga. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay hab nololeed firfircoon, qaadashada fitamiinada, cunto karti leh, dhammaantood waxay kaa dhigi doonaan kuwo qurux badan oo caafimaad leh.
Sidee naas nuujinta loo habeeyaa
Isticmaalka jojoba saliid muhiim u ah maqaarka iyo timaha
Sida loo eego da 'yartahay sannadahaan: 5 tabaha waxtarka leh
Waxaan la fadhiya ilmo, waxaan doonayaa inaan arko weyn
Amarrada dhalinyarada, quruxda iyo mudada dheer
Qaadashada qaabka Dolce & Gabbana: ku fiican nolol maalmeedka iyo ciidaha
Qurxinta dhalashada gabdhaha
Macmacaanka "Cawska Strawberry"
Khudradda cowska iyo karootada
Keega leh shukulaatada iyo macmacaanka
Sidee u cunaa si habboon si caafimaad leh?
Mala-awaalka carruurta iyo horumarkiisa
Waa maxay nooca biyaha ee aan u cabbi karo haweenka uurka leh iyo hooyooyinka naas nuujinaya?
Aromaasku waxay muujinayaan calaamadaha jooniska
Calool-galis: sababaha muuqaalka, daaweynta
Boorashka ku jira makhaayadda
7 xaqiiqooyin ku saabsan qalliinka caagga ah, oo haween kasta waa in ay ogaato
Lahaanshaha mucjisada ah ee sanadka cusub
Julienne oo ka soo jeeda biyaha badda
Saliid saytuun ah oo ka samaysan calaamado fidsan
Anton Kostenko ayaa xiran doona Olga Buzovoy, sawir
Warbaahinta: Natalia Podolskaya waxay sugeysaa ilmo labaad
"Fresh Jet" ee Xiriirrada Galmada
Maraq muuska oo leh qoryo luul